Fitokanana ny Seminera Propedetika Provinsy Ekleziastika Atsimo Atsinanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Aoka ny rariny hikoriana... il y a 42 minutes
Notanterahana ny 17 novambra 2020 ny fitsofan-drano ny Seminera Propedetika vaovao, Md Kizito, miorina ao Analamanga, Andranomiadiloha. Toeram-piofanana natokana ho an’ny mpaniry ho pretra avy amin’ny Arsidiosezy Fianarantsoa dia ny Diosezy Fianarantsoa, Ambositra, Mananjary, Farafangana, ary Ihosy. Nitarika ny Sorona Masina i Mgr Rabemahafaly Fulgence, Arsevekan’i Fianarantsoa. Nanotrona azy ny Eveka ato amin’ny Arsidiosezy dia i Mgr Rakotonarivo Fidelis, Evekan’ny Diosezy Ambositra, Mgr Jose Alfredo Caires De Nobrega an’ny Diosezy Mananjary ary ny Evekan’ny Diosezy Ihosy, Mgr Razakarivony Fulgence. Taniketsan’ny Eglizy ny Seminera. Lalana iray izorana mankany amin’ny fiainana maha Pretra. Isan’izany ny seminera propedetika. Miantoka ny hoaviny ihany koa satria toeram-panomanana tanora hanao ny raharaha masina. Fotoana handalinany ny momba an’Andriamanitra. “Fahasoavan-dehibe ho an’ny Fiangonana koa ny fananany Seminera Propedetika”, hoy Mgr Fulgence Rabemahafaly. Tao anatin’ny roapolo taona, nitambatra tany Toliara ny Propedetikan’ny Arsidiosezy Fianarantsoa sy i Toliara. Manomboka izao kosa, efa manana ny azy izy. “Azo lazaina fa vokatra voalohany tamin’ny fandalovan’ny Papa Ray Masina Fransoa teto amintsika koa izao fahazoana ny Seminera Propedetika eto Fianarantsoa izao”, hoy hatrany ny Arseveka.
Tamin’ny famoaboasana ny tenin’Andriamanitra no nanambaran’ny Arseveka fa misy ny dingana arahina eo amin’ny fiainana vao tena mahazo an’i Jesoa sy tonga hatrany amin’ny fibebahana toa an’i Zake isika. Namaranany ny fampianarany ny nanazavany ny soratra masina fanevan’ity toeram-panabeazana vao notokanana ity, manao hoe: “Izay manan-tsofina aoka hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny Eglizy”. Tsy misy olona voailika rehefa manatona an’Andriamanitra sy mihaino ny teniny fa afaka mizotra any amin’ny lalana mazava avokoa ny tsirairay. “Zava-dehibe ho an’ny famaliana ny fiantsoan’Andriamanitra ny fisokafan’ny seminera Propedetika eto amin’ny Arsidiosezy Fianarantsoa izao”, hoy ny Evekan’ny Diosezy Ambositra, Mgr Rakotonarivo Fidelis. “Ahafahana mitantana bebe kokoa ny tanora sy manamora ny fiofanana ary ny fanabeazana azy ireo aorian’ny seminera zandriny, eny Kianjasoa. Nambarany ihany koa fa tsy ho an’ny Arsidiosezy Fianarantsoa irery ihany fa ho an’ny Fiangonana eran-tany. Azo lazaina fa hampitombo isa ny tanora hamaly ny Antson’Andriamanitra ho Pretra Relijiozy na ny ho pretran’ny Diosezy ny fisiany. Nohamafisiny fa zava-dehibe eo amin’ny fiainam-piangonana ny fanofanana tanora mankany amin’ny fiainana maha Pretra. Nanentanany azy ireo ny fanarahana antsakany sy andavany izay torolalana sy toromarika omen’ny mpanabe. Toy izany koa ny fandraisana am-pitiavana ny fanabeazana atolotra.
Voatendry ho Rektioran’ity toeram-panabeazana vaovao ity i Mompera Rasolofomahafaly Jean Donatien Walburge. Tamin’ny fandraisam-pitenenana nataony no nilazany fa “fanomanana mankany amin’ny Seminera Zokiny ao Vohitsoa ny Seminera Propedetika. Mivavaka sy mihaino ny tenin’Andriamanitra no tena atao ao, araka ny teny fanevany”. Toerana ianarana miaina ny firahalahiana sy ny fiainam-pianakaviana ary fiomanana amin’ny fitantanana sy fanompoana ny vahoakan’Andriamanitra. Nalaina hiaro ny seminera ny Olomasina tanora, i Md Kizito satria manabe tanora no atao ao. Isan’ny Olomasina martiry avy any Ouganda i Md Kizito. Izy no zandriny indrindra, satria vao 13 taona monja izy tamin’izany. Teraka ny taona 1873 izy, nodimandry ny taona 1886. Natsangana ho olomasina ny taona 1964. Mpiasa tao andapan’ny mpanjaka izy. Tao no nianarany ny finoana. Vita Batemy izy, ny alin’ny 25 Mey 1886, mialoha ny nandorana velona azy, niaraka tamin’ny namany 22. “Veloma ry namako fa soa izao lalana alehantsika izao”. Izany ny teniny talohan’ny ho faty: Ankalazain’ny Eglizy isaky ny 3 jona ny fetin’ireto olomasina martiry avy any Ouganda ireto. Marihina fa tanora 48 mirahalahy avy amin’ny Arsidiosezy Fianarantsoa no miofana ao amin’ny Seminera Propedetika amin’izao fanombohany izao. Avy amin’ny Diosezy Mananjary ny 4. Telo mirahalahy. avy any Ihosy. Tanora 19 avy any Ambositra ary 22 kosa ny avy eto Fianarantsoa.
Fanambaran'ny FFKM : Aoka ny rariny hikoriana... - il y a 42 minutes